Umbhobho wesquare owenziwe igalvanized wahlulwe waba ngumbhobho otshisayo we-galvanized square kunye nombhobho obandayo opholileyo ovela kwinkqubo yokuvelisa. Kungenxa kanye ngenxa yokucutshungulwa okwahlukeneyo kwemibhobho emibini yesikwere enezibilini ezinezinto ezininzi ezahlukeneyo zomzimba kunye neekhemikhali. Ngokuqhelekileyo, banokwahlukana okuninzi kumandla, ukuqina kunye neempawu zoomatshini.
Idiphu eshushu umbhobho ophindwe kabini
Umbhobho wesikwere owenziwe ngegalvanized
Umbhobho oshushu owenziwe ngesinyithi umbhobho osikweri: ngumbhobho osikweri odityanisiweyo emva kokukrala kunye nokwenza ngepleyiti yentsimbi okanye umcu wentsimbi, kwaye ngokwesiseko salo mbhobho wesikwere, umbhobho osisikwere ubekwe kwidiphu eshushu-diphu kwaye yenziwe emva kothotho lwe ukuphendula kweekhemikhali. Inkqubo yokuvelisa i-hot-dip galvanized square pipe ilula, ukusebenza kwemveliso kuphezulu kakhulu, kwaye kukho iintlobo ezininzi kunye neenkcukacha. Olu hlobo lombhobho wesikwere lufuna izixhobo ezincinci kunye neemali, ezilungele ukuveliswa kwabavelisi bemibhobho yesikwere esincinci. Nangona kunjalo, ngokwamandla, amandla alo mbhobho wentsimbi angaphantsi kakhulu kunombhobho osikwere ongenamthungo. Umbhobho obandayo we-galvanized square usetyenziswa kumbhobho wesikwere ukwenza umbhobho wesikwere ube nomsebenzi wokulwa nokubola ngokusebenzisa umgaqo wokubanda obandayo. Ukwahluka kwi-galvanizing yediphu eshushu, i-galvanizing ebandayo yokwambathisa ikakhulu ithwala i-anti-corrosion ngomgaqo we-electrochemical. Ngoko ke, kuyimfuneko ukuqinisekisa uqhagamshelwano olupheleleyo phakathi kwe-zinc powder kunye nentsimbi, okubangela ukuba i-electrode ihluke, ngoko ke unyango lwentsimbi lubaluleke kakhulu.
Umahluko phakathi kwegalvanizing eshushu kunye nebandayo
Iityhubhu zesikwere ezivuthisiweyo ziquka iityhubhu zesikwere ezishushu-diphu kunye neetyhubhu zesikwere ze-electrogalvanized square. Iityhubhu ezitshisayo zediphu ezisikwere zibandakanya indlela emanzi, indlela eyomileyo, indlela ye-lead-zinc, indlela yokunciphisa i-oxidation, njl njl. Umahluko ophambili phakathi kweendlela ezahlukeneyo zokugalela i-hot-dip yiyiphi indlela esetyenziselwa ukwenza umphezulu wombhobho usebenze kwaye uphucule umgangatho wokugalela emva. ukucocwa kweasidi yokucoca kumbhobho wentsimbi. Okwangoku, inkqubo eyomileyo kunye nenkqubo ye-redox isetyenziswa kakhulu kwimveliso, kwaye iimpawu zabo ziboniswa kwitheyibhile. Umphezulu we-zinc layer ilula kakhulu, ixinene kwaye ifanayo; Iimpawu ezilungileyo zoomatshini kunye nokumelana nokubola; Ukusetyenziswa kwe-zinc ngama-60% ~ 75% ngaphantsi kunaleyo ye-galvanizing yediphu eshushu. I-Electro galvanizing inobunzima obuthile bobugcisa, kodwa le ndlela kufuneka isetyenziselwe ukugquma icala elinye, ukugquma okumacala amabini kunye nobukhulu obahlukeneyo bokwaleka komphezulu wangaphakathi nangaphandle, kunye ne-galvanizing yombhobho obhityileyo. Ngenxa yokuba umbhobho wesquare owenziwe igalvanized kwi-square pipe, ububanzi besicelo sombhobho we-galvanized square uye wandiswa kakhulu xa kuthelekiswa nombhobho wesikwere. Isetyenziselwa ikakhulu udonga lwamakhethini, ukwakhiwa, ukuveliswa koomatshini, iiprojekthi zokwakha isinyithi, ukwakhiwa kweenqanawa, inkxaso yokuvelisa amandla elanga, ubunjineli besakhiwo sentsimbi, ubunjineli bamandla, iplanti yamandla, oomatshini bezolimo kunye neekhemikhali, udonga lwamakhethini eglasi, i-chassis yemoto, isikhululo seenqwelomoya, njl. Ngenxa yokuba umbhobho wesquare owenziwe igalvanized kwi-square pipe, ububanzi besicelo sombhobho we-galvanized square uye wandiswa kakhulu xa kuthelekiswa nombhobho wesikwere. Isetyenziselwa ikakhulu udonga lwamakhethini, ukwakhiwa, ukuveliswa koomatshini, iiprojekthi zokwakha isinyithi, ukwakhiwa kweenqanawa, inkxaso yokuvelisa amandla elanga, ubunjineli besakhiwo sentsimbi, ubunjineli bamandla, iplanti yamandla, oomatshini bezolimo kunye neekhemikhali, udonga lwamakhethini eglasi, i-chassis yemoto, isikhululo seenqwelomoya, njl.
Ngaphambili: Ukumelana nokubola kombhobho wentsimbi ekhandiweyo eTshayina
Okulandelayo: Umenzi we-45# udonga olungqingqwa lombhobho wentsimbi ongenamthungo
Umzi-mveliso wemibhobho yesikwere eGalvanized
Umbhobho weNtsimbi oGalisiweyo
Umbhobho weSquare ongenamthungo woLwakhiwo lwentsimbi
iSquare Steel Pipe
I-Stainless Steel Square Tube
Umenzi wemibhobho yentsimbi engenamthungo etsalwa ebandayo
I-15CrMoG isiqinisekiso somgangatho wentsimbi yombhobho woxinzelelo oluphezulu